Deegaan | Radio Himilo | Page 4
Home / Deegaan (page 4)
Waa kuwee dalalka leh hawada ugu nadiifsan caalamka?
Mahad Mohamed March 14, 2019
Himilo FM –Finland ayaa ku faaneysa inay noqotay dalka ugu hawada wanaagsan ururka Midowga Yurub hase ahatee marka la eego caalamka oo dhan waxaa ka horreysa Iceland oo leh hawada ugu nadiifsan dunida. Kaalmaha kale ee xigga ee dalalka leh ...
Sahan: Magaalooyinka ugu wanaagsan iyo kuwa ugu liita xagga nolosha caalamka
Mahad Mohamed March 13, 2019
Himilo FM –Magaalada Vienna ayaa sannadkii 10aad oo xiriir ah waxay noqotay magaalada ugu wanaagsan caalamka ee lagu noolaado. Sida ku xusan qiimeynta Mercer Quality of Living Survey, magaalooyinka Yurub ayaa noqday kuwa ugu horreeya liiska magaalooyinka ugu wanaagsan xagga ...
Turkiga: Lamaane ku nool jasiirad fog muddo 15 sanno ah!
Mahad Mohamed March 10, 2019
Himilo FM –Hüseyin Afacan iyo xaaskiisa Ayşe Afacan oo da’doodu tahay toddobaatameeyo ayaa ku nool jasiiradda fog ee Çiçek muddo 15 sanno ah sida laga soo xigtay warbaahinta maxaliga ah ee Turkiga. Waxaa ku yaalla jasiiradan geedaha nuucyadooda kala duwan ...
Himilo FM – 3-da bisha March sannad kasta waa maalin ama fursad loogu dabaal-dego noolaha kala duwan ee duurka ku nool si kor loogu qaado wacyiga dadka ku howlan daryeelkooda iyo kuwa moogan. Isla markaasna, maalintani waxay na xusuusinaysaa baahida ...
Tuugo xaday geedo ku fadhiya 118 kun doolar!
Mahad Mohamed March 2, 2019
Himilo FM – Koox xirfadlayaal tuugo ah ayay u suura gashay inay xadaan 7 geed oo ah nuuca yaryar oo ku fadhiya qiimo dhan 118 kun oo doolar sida ay qoreen inta badan warbaahinta caalamka. Waxa uu falka xatooyada ah ...
Mahad Mohamed February 24, 2019
Himilo FM –Dowladda hoose ee magaalo dhacda koonfurta Talyaaniga ayaa siinaysa muwaadin kasta lacag dhan 250 Euro oo u dhiganta 283 doolar haddii uu adeegsanayo baaskiil halkii uu raaci lahaa mooto ama gaari. Tani waxay qeyb ka tahay mashruuc cusub ...
Wax ka ogow sababta loo iibinayo gobal ku yaala Mareykanka?
Mahad Mohamed February 23, 2019
Himilo FM –Dalka Mareykanka, kumanaan qofood ayaa falcelin ka sameeyay warqad furan oo lagu iibinayo gobalka Montana ee dhaca waqooyiga dalkaasi si deymaha dalka lagu leeyahay loo yareeyo. Wrageyska Time ee Mareykanka ka soo baxa ayaa sheegay in 12 kun ...
Seynisyahan caan ah oo wax badan ka sheegay kuleylka dunida oo geeriyooday
Himilo FM –Seynisyahan bixiyay digniinadii ugu horreeyay ee ku saabsan isbadalka cimilada islamarkaana caan ku ahaa eray bixinta “Kuleylka caalamiga ah” ayaa geeriyooday isaga oo da’diisu tahay 87. Wallace Smith oo muddo dheer bare ka ahaa jaamacadda Columbia University ayaa ...
Wax ka ogow sheekada ninka xanaaneeya 2 Milyan oo balan baalis ah!
Himilo FM –Balan baalista waxaa lagu tiriyaa xayawaanada ugu quruxda badan si gaar ah kuwa xasharaadka, waxay leedahay qurux indho daraan-dar ah iyo midabo soo jiidasho leh. Waxay balan baalista ku habboon tahay deegaan kasta laakiin waxay ku badan tahay ...